Wiil Soomaali ah oo bilad u soo hooyay Sweden | Somaliska
Oradyahanka Soomaaliga ah ee lagu magacaabo Mustafa Mohamed ayaa bilad dahab ah u soo hooyay Sweden ka dib markii uu kaalinta 4-aad ka galay tartanka orodada Stockholm Marathon. Mustafa ayaan aad ugu farxin natiijada uu soo hooyay. Tartanka ayaa waxaa kaalinta 1-aad ka galay Shumi Gerbaba oo ka socday Ethiopia.
Mustafa ayaa sheegay in dhamaadkii orodka in uu dareemay daal iyo socon waayaa. Markii uu gaaray goobta dhamaadka ayuu mudo 20 daqiiqo ah waxa uu ku sugnaa neef qaadasho, isagoo ku tilmaaamay orodkaan midkii ugu xumaa. Sababta keentay daalka ayuusan cadeyn isagoo sheegay in uu si fiican u tababartay.
Si kataba ha ahaatee Mustafa ayaa ku guuleystay bilad dahab ah. Bisha Augusti ayuu sidoo kale Sweden ku matali doonaa tartanka orodada ee lagu qaban doono Mosko, Ruushka.
Sidoo kale Sweden ayaa waxaa matalaysay dhinaca dumarka gabadha ka soo jeeda Kenya ee lagu magacaabo Isabellah Andersson iyadoo si sahal ah ku gashay kaalinta 1-aad ee orodka Stockholm.
June 3, 2013 at 14:02
Walaal dee kalainta 4-aad billad dahab ah goorma ayaa loo bedelay
Asc dhamaan hambalyo ayaa leeyahay wiilkena somaliyed ee guusha soo hoyay. Dhanka kale arinti laba sano yaa war ka haayo malmahan warkedii waa la waayay asxaabta ku tixan webka aqbaarta soo gudbiya
arita jubalan wax ka hadlo mlaah miayya
Asc dhamaan Asxaabta Orodkaan Tv waan ka daawanay 3ugu horeesa ayaa kala qaatay Dahabka,,,Qalinka,,,,,Maarta ma Aqaan meesha laga keenay in tan afaraad bilad la siiyay weliba mid dahab ah ma sheegin in qoraalka farta kaa xaday
waxaan ka jeclaan lahaa inuu u ordo Soommaliya oo uu iyada bilad u soo hoyo
mukhtar hassan mohamed crahman says:
we are vey glad a somali runnur from swden and we hope to be the highest one for the coming championship if god will to say in addition for mustafa,s dear father hassan looking for him and glad his success please call either these numbers 002524503418 this number borama somaliland or 00251915161426 this number is ethiopia
mukhtar hassan mohamed abdirahman says:
HASSAS IS THE FATHER OF MUSTAFA SOMALI RUNNER AND VERY-VERY GLAD TO HEARD HIS SON WAS ONE OF THE WINNERS WHO ALWAYS SUCES LIKE THIS 002524503418 OR 00251915161426